Momba anay - Blackjack77
Tena	/ Momba ANAY
Ekipa Blackjack77 sy filozofia miasa
Online trano filokana mandresy bebe kokoa ny lazany amin'izao fotoana izao. Amin'ny olona rehetra ny latabatra Casino lalao, blackjack no manana ny ambony indrindra fitakiana satria manome ny tena mahasoa mifanohitra. Tsy toy ny slots sy roulette, blackjack dia mitaky fahalalana sy fahaizana ny sasany. Noho izany ny tanjontsika dia ny hanampy anao hianatra blackjack fitsipika fototra sy paikady mahomby kokoa avy amin'ny manam-pahaizana ao amin'ny orinasa Casino. Izany dia hanampy anao hanao fanapahan-kevitra sy misaina kokoa faran'izay betsaka ny winnings in-tserasera trano filokana.
Nanomboka tamin'ny 2019 noho ny ekipa fatra-paniry laza, Blackjack77 dia vohikala natokana ho fandrakofana fanontaniana manan-danja rehetra amin'ny mahafehy blackjack, avy amin'ny fitsipika sy paikady fototra azo antoka filokana ho fomba fanao. Mpamaky dia handray ny hanitatra ny fahalalany sy ny fahaiza-manao hanatsarana ny blackjack rehefa milalao lalao matihanina fihetsiketsehana izay efa voafidy sy notsapaina noho ny ekipa.
Author sy Editor in Lehiben'ny
Abraham Davis dia iray amin'ireo mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Blackjack77 fitantanana. Niasa toy ny rindrambaiko developer filokana ho an'ny orinasa maro. Nazoto mpilalao ny blackjack sy Poker, ny matihanina Abrahama nitondra traikefa sy ny fahaiza-manao mba ho lalao Blackjack77 ny loharanom-baovao tsara indrindra ho an'ny mpilalao Casino aterineto.
Koa izy nanangona ny miasa ny Blackjack House Edge Calculator, ny miasa ho an'ny mpilalao efa mandroso izay manampy anao hahita ny sy ny mifanohitra ny Casino ao amin'ny blackjack manokana lalao milalao ianao.
Joanna Nelsen no voasoratra mitarika afa-po. Izy ny ekipa mitantana ny mpanoratra mba ho azo antoka fa ny votoatiny no manome tsara-voasoratra, marina ary milaza ny marina. Joanna no lafika ao amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny asa, dia efa nanoratra tranonkala afa-po mahery 9 taona. Ankoatra izany, izy dia liana amin'ny aterineto trano filokana ary vonona ny hizaha toetra vaovao ny fety mitovy amin'ny toerana tena Casino lalao. Nandritra ny taona maro, dia tonga mahafehy ny fanampiana ny olona hahatakatra ny fitsipika sy saro filokana ho misaina tsara argumented fanapahan-kevitra raha ny amin'ny filokana. Joanna tia blackjack noho ny mahay mandanjalanja eo kajy loza sy ny fanapahan-kevitra stratejika, ary mitondra ny hafanam-po avy amin'ny filalaovana ny lalao ho an'ny mpamaky.
Maria Kowalski dia Casino mpandalina ho an'ny ekipa famerenana Casino. Nipetraka izy ary nianatra tany Paris, Amsterdam sy Krakow sy miteny 5 fiteny. Alohan'ny manatevin-daharana ny ekipa, Maria niasa tamin'ny fikarohana ara-barotra sy ny Analytics. Ny mazava tsara toetra, miaraka tsara ny tsipiriany, fikarohana lalina sy fikirizana hahatonga ny iray amin'ireo matihanina ambony eo amin'ny ekipa. Na dia eo aza ny fandaharam-potoana be atao, Maria tia asa samy hafa toy ny milalao blackjack Mitsinkafon'i, sary, psikolojia sy ny fisaintsainana.
Annisa Aksoy dia iray amin'ireo mpandalina ny Casino, izy fikarohana trano filokana vaovao, mifototra amin'ny kalitao ny torolalana sy ny fepetra, dia manamarina sy manan-danja foana ny masontsivana Casino firaketana ny zava-misy sy marina tsara. Alohan'ny fandraisana ny andraikitry ny Casino mpandalina dia tonga lavitra avy amin'ny mpanjifa mpandraharaha, IT helpdesk, Payroll tolotra sy ny asa.
Annisa fitiavana mba handeha, indrindra fa ho any Italia izay izy nandritra ny 3 taona tany Florence. Izy tia milalao Poker niaraka tamin'ny namany sy ny manaraka rehetra Fifaninanana tenisy miaraka amin'ny hafanam-po lehibe, satria izay no tiany fanatanjahantena ho an'ny mihoatra ny 15 taona!
Filokana tompon'andraikitra mpitantana Projects
Vincent Martin dia monina any Hamburg, dia nahazo traikefa midadasika matihanina eo amin'ny raharaham-barotra,-barotra, sy ny fanatanjahan-tena Poker hilokana. Mitarika ny andraikitra Filokana sy mitantana tetikasa isan-karazany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao eo amin'ny fanatsarana ny fitsipika sy mandray anjara amin'ny fanadihadiana sy fanombanana Casino dingana ihany koa.
Vincent tia tambajotra, milalao baolina kitra miaraka amin'ny namany na ny petanque miaraka amin'ny fianakaviany, dia lavitra, ary ny famakiana boky tsara.
Tsy mifidy ny tsara indrindra ihany no trano filokana
Rehefa mahita an-tserasera trano filokana ho azo antoka isika handinika ny lafin-javatra samy hafa isan-karazany izy ireo manome. Izany no atao mba manoro hevitra anareo amin'ny aterineto ihany no azo antoka trano filokana izay manome ny tsara indrindra lalao traikefa.
BANKY & Fandriampahalemana
Tsy hahatakatra ny maha zava-dehibe ny fitandremana ny manokana sy ara-bola vaovao soa aman-tsara. Nandritra ny fanombanana dingana isika mijery raha toa trano filokana no manan-kery SSL encryption, dia diniho tsara ny fanamarinana ny Casino fahazoan-dalana, ho azo antoka no navoakan'ny ara-dalàna regulator, maso raha toa trano filokana dia voafehin'ny tsy miankina manam-pahefana toy ny eCOGRA, fitsapana lalao mba ho azo antoka izy ireo tsy hosoka. Koa izahay ho azo antoka ny petra-bola dingana dia mora, ny fandoavam-bola dia ampiasaina haingana tena ary afaka ny hiala ao anatin'ny fe-potoana voalaza winnings amin'ny trano filokana.
Tombontsoa & Promotions
Ny mpandalina Casino mijery karazana rehetra tombontsoa natolotry ny trano filokana. Tsy mifidy trano filokana amin'ny avo indrindra, ary tonga soa tombontsoa ho azo antoka fa tombony fepetra tsara tarehy. Foana izahay isaky ny fanaraha-maso ny fomba Casino matetika manome vaovao sy ny tombontsoa manokana ho an'ny mpikambana ao fandrisihana. Jereo koa isika hoe tsy mivadika Casino fandaharan'asa sy mandrefy raha toa ny soa no tena tsara tarehy, ary mahasoa ho an'ny mpilalao.
Isika fitsapana Casino lalao avy amin'ny iPhone, Android sy ny takelaka fitaovana mba hahazoana antoka fa 1) lalao hampidiran'izy haingana 2) izy ireo tsara optimisé ho an'ny kely efijery 3) manokana tombontsoa nanatitra ho Mobile fitaovana mpampiasa tokoa misy, 4) Casino Apps entana fifadian-kanina, manana tsara sy ny firafitry ny sakany fifantenana ny lalao.
Te-hahazo tombony tolotra